Cambaarayn dusha looga tuuray masaafurinta dadka roomerka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Maria Ridderstedt / Sveriges Radio
Cambaarayn dusha looga tuuray masaafurinta dadka roomerka
Publicerat onsdag 27 mars 2013 kl 11.51
In kastoo ay dhaleecayn uga timid ururada xuquuqda aadanaha, haddana Iswiidhen iyo dalal badan oo Midowga Yurub ka tirsan ayaa dad roomer ah u masaafuriyey dalka Kosovo. Iyadoo tirada roomer iskood dib ugu noqda ay soo yaraatay, ayey soo korortay dadka khasabka dib loogu celiyo. Tirakoob ay qortay hay’adda qaxootiga ee Qaramada Midoobay (UNHCR) ayaa muujinaya in laga soo bilaabo sannadkii 2011 ay tirada dadka roomerka ah oo khasabka loogu celiyey Kosovo ay korortay boqolkiiba 50.
Roomer Iswiidhen khasab looga masaafuriyey oo ay Eko la kulantay ayaa sheegay in meesha lagu celiyey ay kala kulmeen cadaadis. Gabar 17 sano jir oo la yiraahdo Brenda oo shan sano ku noolayd Iswiidhen ayaa ka mid ah dadkaas. Gabadhaas ayaa tiri:
- Dadka albaanka ahi waa dhagaxyeeyaan oo waxay noogu yeeraan sigeenare. Waa nala kadeedaa oo dibedda uma bixi karno.
Roomer kor u dhaafay 625 qof ayaa khasab looga masaafuriyey Iswiidhen iyo dalalka Midowga Yurub iyagoo lagu celiyey Kosovo. Golaha Yurub ayaa ku canbaareeyey Iswiidhen iyo dalalka Midowga Yurub dadka roomerka ah oo ay ku celiyaan Kosovo oo halkaas kala kulmaan midabtakoor.
Robert Hård oo ah madaxa ururka xuquuqda aadanaha ee loo yaqaan Civil Rights Defenders ayaa gebi ahaanba dhaleeceeyey dib u celinta roomer:
- Marka dhanka sharciga laga eego, ma ahan wax la difaaci karo in dad loo celiyo degaan ay kala kulmaan midabtakoor qowmiyad ku dhisan. Maxkamadda Yurub ayaa ku sifeysey tallaabadaan in ay la mid tahay jirdil ama wax la mid ah.